Rajooyinka Xirfad ee ugu sarreeya ee Amniga Cyber ​​6
6 Rajooyinka Xirfadda Sare ee Amniga Cyber
Nabadgelyada internetka waa dhaqanka tallaabooyinka lagu ilaalinayo xogta iyo aaladaha weerarada internetka. Markay meheraduhu waayaan macluumaadka lagama maarmaanka ah, waxay u muuqdaan inay arkaan khasaare marka loo eego faa'iidadooda, ganacsigooda, ama sumcadooda.
Weerarada internetka ayaa hadda maraya heerkii ugu sarreeyey abid, taas oo ah sababta amniga internetka uu yahay mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee dhammaan meheradaha, ha yaraadeen ama ha weynaadeen.
Sidaa darteed warshadan ayaa hadda raadineysa xirfadlayaal xirfad leh si ka badan sidii hore. Iyada oo ay sii kordhayso baahida loo qabo falanqeeyayaasha xogta iyo khubarada amniga, magdhawga warshadan ayaa sidoo kale faa'iido u leh sanado badan.
Haddii aad xiisaynayso xirfad ku saabsan amniga internetka, waad awoodaa qaado barnaamijka badbaadinta internetka si aad u barato aasaaska aasaasiga ah oo aad ku kasbato dhammaan xirfadaha la jecel yahay ee xirfadan.
Waa maxay xirfadaha xirfadda Cybersecurity?
Xirfadlayaasha amniga internetka waa inay ahaadaan -
1. Degdegga u ah xallinta dhibaatooyinka
Xirfadlayaasha ku jira arimahan waxay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan dhibaatooyinka mar walba. Qofku waa inuu ahaado mid u janjeera inuu adeegsado xirfadahooda fekerka muhiimka ah si uu u xaliyo dhibaatooyinka ka dhalan kara jidka.
2. Degdeg wax u baro
Xirfadlayaasha waa in lagu cusboonaysiiyaa dhammaan teknolojiyadda cusub si ay ula jaanqaadaan kuwa wax weerara ee internetka maadaama ay si joogto ah u hal -abuurayaan una samaynayaan noocyo cusub oo khayaano iyo hanjabaado kale ah. Qofku waa inuu noqdaa mid aad u xiiso badan si uu u sii wato waxbarashada.
Khubarada ku xeeldheer arimahan ayaa ah shaqsiyaad hal abuur leh oo fahmaya shaqada farsamada dhinacyadeeda wax ku oolka ah iyo aragti ahaan. Hackers -ku waa kuwo aad u hal -abuur badan oo hal -abuur leh; waxay had iyo jeer raadinayaan dayacanka iyo dariiqooyin cusub, oo tayo leh oo lagu dhex galo nidaamyada. Si loola socdo iyaga, khabiirada amniga internetka waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo hal abuur leh oo gorfaynaya si looga hortago.
Rajooyinka Xirfadda ee Nabadgelyada Internetka
1. Falanqeeyaha amniga
Falanqeeyayaasha amniga waa xirfadlayaal qorsheeya oo fuliya dhowr tillaabo oo amni gudaha urur. Waxay falanqeeyaan nidaamyada amniga waxayna ogaadaan baylahda. Falanqeeyaha amniga ayaa ah jago heer-gelitaan oo ka jira warshadaha amniga internetka.
2. Injineerka Amniga
Injineer xirfad u leh dib u dhiska nidaamyada amniga ee urur. Iyaga ayaa ah kuwa diyaariya nidaamyada ilaalinta. Tani sidoo kale waa astaan ​​shaqo heer-galitaan ee warshadaha.
Cryptographers -ku waa khubaro ku xeel dheer nidaamka nabadgelyada kuwaas oo qora koodhadh si looga hortago in haakarisku ay galaan keydka macluumaadka ama nidaamyada amniga. Waa astaan ​​shaqo oo heer dhexe ah waxayna u fiican tahay kuwa si fiican u yaqaan koodh.
4. Sarkaalka nabadgelyada warfaafinta
Kani waa booska ugu sarreeya warshadaha internetka. Tani waxay ku lug leedahay kormeerida dhammaan dhaqannada amniga ee shirkaddaada. Xirfadlayaashan waxaa lagu cusboonaysiiyaa teknolojiyaddii ugu dambeysay ee dhaqannada amniga internetka, sida aqoonta ugu wanaagsan ee softiweer cusub ama sida ay u dhaqmaan dambiilayaasha internetka. Iyadoo ku xiran baaxadda urur, CISO waxaa laga yaabaa inay si dhow ula shaqeyso Sarkaalka Xog -hayaha Guud, kaasoo mas'uul ka ah howlaha IT -ga ee joogtada ah ee urur.
5. Tijaabiye soo noqnoqda
Tijaabiyeyaasha gulufka ayaa caan ku ah haakariska anshaxa. Xirfadlayaashan ayaa ah khubaro raadiya dabagalka dayacanka iyo daldaloolada hababka ay haakarisku u isticmaali karaan inay dhex galaan. Waxay u isticmaalaan aalado kala duwan tijaabinta shabakadaha, badeecadaha, ama barnaamijyada webka.
6. Architect Security
Naqshadeeyaha amniga waa xirfadle mas'uul ka ah qorsheynta iyo hirgelinta nidaamyada amniga, iyo waliba tijaabintooda. Iyagu waa kuwa ugu horrayn ka ilaaliya xogta khayaanada, jabsiga, ama weerarada DDoS. Kani waa astaan ​​shaqo oo heer sare ah wuxuuna u baahan yahay tababar iyo shahaado badan.
Previous Post:Sida Loo Helo Ogolaanshaha Mastersford Online Masters
Post Next:Aqoonsiga Dugsiyada Caafimaadka ee Kariibiyaanka: Sababta ay Muhiim u tahay